डाक्टरले लिए दुई सन्तान र श्रीमतीको ज्यान, ओमिक्रोनको डरले यस्तो गरेको खुलासा – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १८, २०७८ समय: २२:११:२६
एक डाक्टरले आफ्ना दुई सन्तान र श्रीमतीको ज्यान लिएका छन्। भारतको उत्तर प्रदेशको कानपुरमा यस्तो घटना घटेको भारतीय सञ्चारमाध्यहरुले जनाएका छन्। प्रहरीका अनुसार डा. सुशील कुमारले आफ्ना दुई सन्तान र श्रीमतीको ह’ ‘त्या गरेका हुन्। उनले घटनापश्चात आफ्ना भाइलाई प्रहरी बोलाउन म्यासेज गरेको बताइएको छ।
प्रहरी त्यहाँ पुग्दा डा. सुशील भने फ’रा’र भइसकेका थिए। प्रहरीले एउटा नोट ब’रा’म’द गरेको छ। जसमा लेखिएको छ- ओमिक्रोनका कारण मैले ह’ ‘त्या गरेँ। अब यिनीहरुको शव गन्नु पर्दैन।
प्रहरीका अनुसार डा. सुशीलले ४८ वर्षीय श्रीमती, १८ वर्षीय छोरा र १० वर्षकी छोरीको ह’ ‘त्या गरेका हुन्। प्रहरीका अनुसार डा. सुशील डि’प्रे’श’न’का बिरामी हुन्।
यस्तै यता नेपालमा नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन अफ्रिकी मुुलुकसहित भारतमा देखा परेपछि पश्चिमी सीमानाका गड्डाचौकीमा सतर्कता अपनाउन थालिएको छ।
सीमानाका भएर आउने यात्रुमध्ये श’ङ्का’स्पद बिरामीको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरी नतिजा पोजेटिभ आए नमूना पुनः परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। ‘सीमानाकाबाट भित्रिने यात्रुको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा नतिजा पोजेटिभ आए उपचार र परीक्षणका लागि अस्पताल पठाउँदै आएका थियौ’”, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले भने, नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन भारतलगायतका मुलुकमा देखा परेपछि नमूना परीक्षणा गर्न केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाइने गरिएको छ ।’
नयाँ भेरियन्ट फैलिन नदिनका लागि सीमा क्षेत्रमा सावधानी र सतर्कता अपनाइएको उनले बताए। जोखिमलाई कम गर्न भारतबाट आउने यात्रुको पीसीआर रिपोर्टसँगै कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइएको कार्डसमेत हेर्ने गरिएको छ।
भारतबाट भित्रिने यात्रुको पश्चिमी सीमा क्षेत्र गड्डाचौकीमै मलेरिया, क्षयरोग र परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा राखिएको हेल्थ डेस्कमै शङ्कास्पद यात्रुको मलेरिया, क्षयरोग र परीक्षण गरिँदै आएको छ। ‘मलेरिया सीमा क्षेत्रमा रहेको हेल्थ डेस्कमा परीक्षण गरी यकिन गरिन्छ’, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सुनारले भने, ‘क्षयरोगको परीक्षणका लागि खकार सङ्कलन गरी जिल्लामै रहेको जिन ल्याबमा लगेर परीक्षण गर्छौं।’ क्षयरोगको नतिजाबारे बिरामीलाई फोनमार्फत जानकारीसमेत दिइने गरिएको छ।